Asongadin’ny Fanafihana ny ONG Iray Miady Ho An’ny Zon’ny Mpiasan’ny Orinasa Makedoniana Mpanao Lamba Ny Loza Mananontanona ny Fiarahamonina Sivily · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Janoary 2017 12:31 GMT
Mpanafika tsy fantatra anarana nanipy vato teny amin'ny foibe kelin'ny Kolontsaina an'ny mpiasa mpanenona lamba antsoina hoe “Tekstil” (Textile). Sary avy amin'i Meta.mk, nahazoana alalana.
(Lahatsoratra teny anglisy nivoaka ny 2 Desambra 2016)
Nisintona fanairana ny fiarahamonina sivily any Makedonia taorian'ny fanafihana nanjo ny tranon'ny orinasa kely tsy miankina amin'ny fanjakana (ONG). Manampy trotraka ny efa fihenjanana mafy manodidina ny firenena noho ny fifidianana hatao ny 11 Desambra 2016 izany zava-nitranga izany.
Ny fanafihana tao amin'ny tanànan'i Štip, izay – miaraka amin'ireo tanàna kely any amin'ity faritra atsinanana ity — mampiantrano ny orinasan-damba ao Makedonia, dia tena nanimba ny ezaky ny vondrona mafana fo iray niezaka nanandratra ny feon'izy ireo hanohitra ny fepetra mahatsiravina iasan'ireo mpiasan'ny orinasan-damba any Makedonia. Ity faritra ity no ampahany tsara kokoa ao amin'ny firenena itoeran'ireo orinasan-damba sy hoditra, izay nampiasa 7,75% (na 37.217) tamin'ireo olom-pirenena ao Makedonia tamin'ny 2012.
Ilay Foibe kelin'ny Zavakanto sy Kolontsaina, “Tekstil” (“Textile”), zay vondrona mafana fo no nanokatra azy tamin'ny jolay 2015, dia tratry ny tora-bato tamin'ny marainan'ny 26 Novambra 2016, ary rovitra amin'ny ampahany ny takelaka misy sary miloko mena maneho milina fanjairana.
Toerana fihaonan'ireo mafana fo avy amn'ny “Glasno — Tivkoto mnozinstvo” (Mafy –Ny fahanginan'ny maro an'isa) io foibe io, fikambanana niforona tamin'ny fiandohan'ny taona 2016, izay manana tanjona tokana amin'ny fiadiana ho an'ny zon'ny mpiasan'ny orinasan-damba. Nitsidika ny tanàna tany amin'ny faritra atsimon'ny firenena ilay fikambanana, nitondra resadresaka sy atrikasa momba ny zon'ny mpiasa, ary nanandrana nampianatra ireo mpiasa momba ny zon'izy ireo hitokona, hanohitra ary hitambatra anaty sendikà. Amin'izao fotoana izao, tsy misy sendikà miaro ny zon'ny mpiasan-damba, na dia aza izy ireo aza no manome ny vondrona iray goavana voailikilika sy iharan'ny tsindry hazo lena.
Manome toerana ho an'ny hetsiky ny kolontsaina sy fifanakalozan-kevitra momba ny zon'ny mpiasa ny “Tekstil”, nefa noho ny tahotra ny mpampiasa– ary ny antokon'ny mpitondra izay miaro ny tombontsoan'izy ireo — mangataka ireo mpiasa mandray anjara mba ho afenina ny mombamomba azy ireo
Rehefa mamoaka vaovao momba ny hetsik'izy ireo momba ny zon'ny mpiasa, matetika afenin'ny Glasno ny mombamomba ireo mpandray anjara izay matahotra momba ny fiveloman'izy ireo na ny ratsy kokoa noho izany. Sary avy amin'ny pejy Facebook-n'izy ireo.
Araka ny tati-baovao avy amin'ny Kanal Plus, fahitalavitra ao an-toerana, nanomboka fanadihadiana momba ilay zava-nitranga ny polisy.
Taorian'ny fanafihana, namoaka fanehoankevitra ny “Glasno” – niarahan'ireo fikambanana 74 nosoniavina – nanamelohana azy io ho toy ny fanafihana ny fanirian'ny mpiasa mba hitaky ny zony:
Raha raisina hoe tao anatin'ny volana maromaro lasa, faritra malalaka nahafahan'ny mpiasan'ny orinasan-damba sy hoditra nikarakara fihaonana izy ity, raisinay ho toy ny fanafihana ny fanirian'izy ireo mba hisian'ny fanovàna ny satan'izy ireo sy ny fanatanterahana ny zony izao.
Araka an'i Goran Trajkov, mpikambana iray ao amin'ny fikambanana niteny tao anatin'ny lahatsary:
Nandrahona ny sasany amin'ireo mpiasanay mpilatsaka antsitrapo tamin'ny tambajotra sosialy aloha izy ireo, avy eo nosimbàny ireo fitaovana fampahafantarana naelinay nanodidina ny tanàna sy ny faritra, ary im-betsaka nisy olona tsy fantatra niezaka mafy ny hamaky amin-kerisetra ny Foibe, tonga tamin'ny fara-tampony izany rehetra izany tamin'io fanafihana maraina io rehefa vakin'ny vato ny varavarankely ary simba ny takelaby misy ny soratra ‘KUC — Tekstil’ (Foiben'ny Kolontsaina sy Zavakanto — Orinasan-damba).
Miatrika toe-javatra mampidi-doza ireo mpiasa ireo. Ireo orinasan-damba anny fanjakàna tamin'ny fotoana sosialista dia nanome làlana ny firoboroboana tsy mitsahatry ny isan'ireo fandraharahàna madinika tsy miankina nandritra ny fotoanan'ny tetezamita tamin'ny taona voalohan'ny fahaleovantenan'i Makedonia tamin'i Iogoslavia. Any amin'ny tanàna toa an'i Štip na ireo tanàna manodidina ao Probištip, Vinica na Kriva Palanka, izay zara raha ahitana asa, ireo orinasa ireo no mpampiasa voalohany.
Araka ny lalàna, ny karama farany ambany amin'ny sehatry ny orinasan-damba dia 9.000 Dinara (156 Dolara) kely noho izay nekena ara-dalàna amin'ny karama farany ambany any amin'ny sehatra hafa rehetra (10,080 Denara na 175 Dolara). Nefa ny zava-misy dia matetika ireo mpiasan'ny orinasan-damba sy hoditra no miasa na dia ambany noho izany aza — mandray karama faran'izay ambany 100 Euros na 107 Dolara isam-bolana, nefa miasa mihoatra ny 50 ora isan-kerinandro ry zareo.
Araka ny fanentanana Akanjo Madio sy ny tatitr'izy ireo tamin'ny 2014 “Nakarina Ambony: Ny karaman'ny fahantrana ho an'ny orinasan-damba any Eoropa Atsimo sy Any Tiorkia“, ho an'ny mpiasan'ny orinasan-damba any Eoropa Atsimo, “ny karama farany ambany ara-dalàna matetika no ny fetra ambony raha tokony ho ny karama ambany indrindra”. Ny ankamaroan'ny mpiasan'ny orinasan-damba any Makedinoa dia vehivavy, izay nanaovan'ilay mpamorona rakitsary Biljana Garvanlieva, efa maty, fanadihadiana ny toe-javatra mampalahelo mahazo azy ireo.
Amin'izao fotoana izao, manao dingana hikarakarana hetsi-panoheran'ny mpiasan'ny orinasan-damba izay hatao any Štip amin'ny 8 Desambra 2016 ny Glasno. Araka ny tenin'i Kristina Ampeva, filohan'ilay fikambanana ary koa mpiasa aminà orinasan-damba:
Io fanafihana io dia tsy fanafihana ny trano fotsiny ihany, tsy vita honerana ny fahasimban'ny fitaovana; fanafihana ny mpiasa io, izay efa nampahoriana sy nohararaotina nandritra ny am-polo taona maro. Nanolo-tena ho azy izahay, ary tsy hiala amin'ny hevitra mba hahatonga ny mpiasa ho olom-pirenena Makedoniana mendri-kaja.